musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Russia Kuputsa Nhau » Russian Convention Bureau Inozivisa Nyowani CEO
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Sagid Zaremukov anotarisana nemabasa ekuenderera mberi nekuvandudza zviitiko zvesangano pamwe nekudyidzana mukati meindasitiri, kusimudzira mukana wezviitiko zvenyika nematunhu ayo, achiumba hurongwa hwepasi rose hweRCB, pamwe nekuzadzisa chirongwa chekugadzira network yedunhu. kongiresi bureaus.
Kubvumwa kweSagid Zaremukov kwakagamuchira 100% rutsigiro.
Musoro mutsva we RCB ane anopfuura makore gumi neshanu ezviitiko mumakambani makuru muindasitiri yechiitiko.
Iye ndiye akasimbiswa nyanzvi yemhando yemubairo yeHurumende yeRussian Federation.
Kusarudzwa kwemutungamiriri mutsva weSangano kwakaitika mukati mehurongwa hweGeneral Musangano we Russian Convention Bureau (RCB) nhengo dzemakambani, dzakaitika muna Chikunguru 9, 2021 panzvimbo yeCosmonautics uye Aviation Center (VDNKh, pavilion 34). Zvinoenderana nemhedzisiro yekuvhota, kubvumwa kwaSagid Zaremukov kwakagamuchira rutsigiro zana%.
Musoro mutsva we RCB ane anopfuura makore gumi neshanu ezviitiko mumakambani makuru muindasitiri yechiitiko. Asati ajoina Russian Convention Bureau, akabata zvinzvimbo zvepamusoro muRESTEC Boka reMakambani, rimwe remasangano anotungamira mumusangano weRussia nemusika wekuratidzira. Muna 15, Sagid Zaremukov akabatana nechikwata cheRussian Convention Bureau uye akataurirana nevakuru vematunhu pamwe nedunhu, pamwe nemasangano ebhizinesi nemakambani muindasitiri yemitambo yenyika, akamiririra zvido zvenhengo dzeRCB mumasangano ehurumende nemabhizimusi eruzhinji indasitiri kuvandudza. Kubva munaKurume 2018, anga achibata director weRCB. Iye ndiye akasimbiswa nyanzvi yemhando yemubairo yeHurumende yeRussian Federation.
Mune rake rondedzero, Sagid Zaremukov akataura kuti chirongwa chinobatika chekudyidzana nevatambi vemaindasitiri akakosha akagadzirwa pamusoro pemakore echiitiko cheChita, kudyidzana zvine hungwaru nemahofisi ematunhu, indasitiri inotungamira nemasangano eruzhinji zvichaenderera. "Tichatsvagawo mafomati matsva ebasa rekubatana rakanangana nekusimudzira musika wechiitiko weRussia nekusimbisa indasitiri," akadaro Sagid Zaremukov.
Mukati megadziriro yeGeneral Musangano weRCB, dzinoverengeka nyaya dzesangano dzine chekuita nezviitwa zveSangano zvakafungidzirwa uye mhedzisiro yeiyo online online chirongwa cheRCB "Summer Academy" yakaziviswa. Iyo purojekiti yakaitwa pamwe chete neR & C Exhibition uye Research Center uye nerutsigiro rweRoscongress Foundation. Chinangwa chayo chaive chekupa vatori vechikamu kukongiresi nemusika wekuratidzira nemukana wekusimudzira wega hunyanzvi kana kuwana hunyanzvi. Gore rino, nyanzvi dzinotungamira 18 dzekongiresi uye indasitiri yekuratidzira uye maindasitiri ane hukama vakave vadzidzisi kuRCB Summer Academy uye vakagovana ruzivo rwavo nevateereri. Vanopfuura vamiriri mazana maviri ekongiresi nemusika wekuratidzira vakave vateereri vechirongwa ichi "RCB Summer Academy". Panzvimbo yeVDNKh, madhipuroma akapihwa kune vakapedza kudzidza uye kutenda kuvadzidzisi veRCB Summer Academy.
JSC VDNKh, NEGUS-Expo uye Prazdnik Vkusa kambani yekudyira vakave vanobatana neMusangano Mukuru weRussia Convention Bureau. Kushanya kweCosmonautics uye Aviation Center kwakaitirwa vatori vechikamu veMusangano Mukuru, pamwe nepakaongororwa nzvimbo, kongiresi nekuratidzira kugona kwenzvimbo dzeVDNKh dzakaratidzirwa.